मध्यरातमा श्रीमतीलाई खुसि बनाउँन खोज्दा घट्यो नसोचेको घ’ट’ना – Gazabkonews
मध्यरातमा श्रीमतीलाई खुसि बनाउँन खोज्दा घट्यो नसोचेको घ’ट’ना
‘राम्रो पढ्छु, आफ्ना खुट्टामा आफैँ उभिन्छु, जीवनमा केही गर्नु छ, पुरूष भन्दा महिला कम हुनुहुँदैन, अरूसित आश्रित हुनुहुँदैन, आश्रित भयो भने हेप्छन् ।’ अहिलेका प्राय सबै महिलाहरू यसै भन्छन् ।तर विडम्बना के छ भने पुरूष भन्दा महिला कम्जाेर नभए पनि श्रीमान भन्दा श्रीमती चाहिँ किन कम्जाेर नै हुन्छन् । महिला पुरुष एक रथको दुई पाङ्ग्रा हुँदा श्रीमान् र श्रीमती चाहिँ एक रथको दुई पाङ्ग्रा भएकाे खासै देखिँदैन।
पुरुष भन्दा महिला कम्जोर भन्न कसैले पनि रुचाउँदैनन्, महिलाहरू कमजोर भन्न पनि मिल्दैन । वास्तवमै महिला कम्जोर हुने पनि होइनन्, कम्जोर बनाइने हो । तर कसले ? समय, परिस्थिति, पुरुष, दोस्री महिला वा आफैले महिलालाई कम्जोर बनाउँदै छन् ? यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन ।खासमा भन्नु पर्दा पुरूषकाे विभिन्न कम्जाेरीले नै महिलाहरू कम्जाेर हुने गरेका छन् । पुरुषहरूकाे एकाधिकारवादी संकिर्ण सोच र सँधै जित्नै पर्ने प्रवृतिका कारण महिलाहरु कम्जाेर बन्दै गएका छन् । त्यसैले त विवाह गर्ने बेला पुरूषहरूले प्राय: आफूभन्दा कम उमेरकी महिलालाई रोज्छन् ।
तर यदि कहिलेकाँही तपाईंको श्रीमान उदास देखिएमा तपाईंले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हुनसक्छ तपाईंका श्रीमान् तपाईंका कारण नै दुखी भइरहेका छन् । तपाईंको कारण र अरु कसैका कारणले तपाईंको श्रीमान तनावमा भइरहेको तपाईंलाई राम्रो नलाग्न सक्छ ।यसलगत्तै आफ्नो घरमा दुई जना अपरिचित व्यक्ति छिरेको भन्दै प्रहरीलाई ती घरधनीले खबर गरेका थिए। यस घटनाको केही मिनेटपछि उनीहरु सही घरमा छिरेका थिए। प्रहरीले लेरोय र उनका साथीलाई फोन गरिएको एक घण्टामा पत्ता लगाई पक्राउ गरेका थिए।